Dawladda oo ku talo jirta in la sahlo xeerka caddeeynta aabbenimo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda oo ku talo jirta in la sahlo xeerka caddeeynta aabbenimo
La daabacay fredag 17 mars kl 10.26
Morgan Johansson: In aaladda internet-ka lagu xaqiijiyo aabbe-nimada
Morgan Johansson (S), wasiirka cadaaladda iyo socdaalka Sweden. sawir: Christine Olsson/TT
Dawladda ayaa aamin-san inay aanay wakhtiga la haysan xeerka oranaya iney waalidku aabbe-nimadooda ku qeexaan qoraal, si ay dabadeed ogolaansho uga helaan waaxda guddiga bulshada.
Xeerka arrinkaa qeexaya ayaa iminka lagu sameeyn doonaa dib u eegis, halka uu wasiirka shuruucda Morgan Johansson u furan yahay sidii xeerka wax looga bedeli lahaa.
Dhallaanka dalkan ku dhasha badankood ayaan ku dhalan guur ka dhexeeya labadooda waalid. Waana mid ku kallifaysa in aabbuhu uu qoraal ahaan ku caddeeyo aabbe-nimadiisa, halkaasina looga baahan yahay laba ruux oo markhaatiyaal ah. Midkaasina oo dabadeed ay waajib tahay in ogolaansho looga helo waaxda guddiga bulshada iyo hooyada ilmaha.
Xeerarkan ayaa muddo sannooyin ahba dhaleeceeyn lagu hayay iyo iney yihiin xeerar aan casriga la socon oo qalafsan, gaar ahaan shakhsiyaadka ilmo wadaaga ee aanu guur ka dhexeeyn.
Waana arrin uu wasiirka shuruucdu la qabo.
– Waxaannu soo jeediney tusaale ahaan in la isticmaalo xiriirrada casriga ah. In caddeeyntan lagu sameeyn karo internet-ka halkii qoraal ahaan loo caddeeyn lahaa, sida uu sheegay.
Caqabad miyaa jirta lagala kulmi karo in dijitaalka lagu sameeyo?
– Waxay ka mid tahay waxyaabaha aannu dooneeyno in baaruhu uu soo caddeeyo, wanaagga iyo xumaanta ka dhalan karta oo la isku qiimeeyo.
Kulankii dawladda ee shalayto ayaa lagu go’aamiyay in baare loo saaro sidii xeerkan loo casriyeeyn iyo sahliba lahaa. Arrinka caddeeynta aabbe-nimo ayaa iyaduna muhiimad ballaaran ku fadhida, sida ku cad tilmaanta dhabba-tuska dawladda.
Waddammada Noorway iyo Finland ayaa la caddeeyn karaa aabbe-nimada inta ilmaha uurka lagu sido ee booqashada lagu tago goobaha xannaanooyinka umulisooyinka.
Dawladda ayaa sidoo kale tusaale ahaan u soo qaadatay dalka Danmark oo dhammaan howlshaasi ka dhigtay mid lagu dhameeyo aaladda dijitaalka.
– Waxaa loo baahan yahay oo keliya in tusaale ahaan loo eego waddammada kale oo su’aalaha noocan ahi ey xoogaa nooga horreeyaan, sida uu sheegay Morgan Johansson.
Qaar badan oo ka mid ah xisbiyada xubnaha ku leh baarlamanka ayaa dhaleeceey-san xeerka iminka. Waxaana loo fahmi karaa in bulshadu wax iska weeydiinayso labada qof ee wada nool ee aanu guur ka dhexeeyn.
Guddi-hoosaadka baarlamanka ee arrimmaha bulshada oo sannadkii 2015 soo saaray shaac ka qaadid ayuu dawladda ku dhiiri-geliyay in dib u eegis lagu sameeyo xeerka.
Emma Henriksson, guddoomiyaha guddi-hoosaadka bulshada ee baarlamanka, kana tir-san xisbiga Kristdemokraterna (KD), ayaa ka mid ah xil-dhibaannada soo dhoweeyey go’aanka dawladda.
Henriksson ayaa ammin-san in loo baahan yahay in aabbe-nimada la xaqiijiyo inta aaney ilmuhuba dhalan.
– Badankood hooyooyinka uurka leh waxey booqasho ku tagaan goobaha dar-yeelka umulisooyinka. Waxaa dhici karta inay suurtagal tahay in goobtaa lagu xaqiijiyo aabaha oo waraaq laga soo diro. Howl loo baahan yahay maahan in baaris lagu sameeyo haddii la ogsoon yahay cidda aabbaha ah. Baarista waaxda adeegga bulshada ayaa loo baahan yahay oo keliya kolka uu shaki yimaado, sida ay sheegtay Emma Henriksson, guddoomiyaha guddi-hoosaadka bulshada ee baarlamanka.